လူဘ၀ ရဲ. သဘောတရား ~ (IT) ကိုထိုက်
လူဘ၀ ရဲ. သဘောတရား
တခါတုန်းက ရွာတရွာမှာ လူတယောက်ရှိတယ် အဲဒီ.လူက ပြောတယ် လူဆို တဲ.ဘ၀က သိမ်.ထူးဆန်းပါလားတဲ. ………အဲဒါကိုကျတော် တို.ဘယ်လိုပြောရမလဲ ……….လူဆိုတာ ဒီးလို ဘယ်ပေါ………………ကောင်းတာလုပ်ရင်ကောင်းမှာ ဘဲ လေ……….မကောင်းတာလုပ်ရင်း မကောင်းဘူးပေါ……….ရိုးရိုးလေးဘဲ တွေးလို.ရပါတယ်…….ကျတော် တို.လူဖြင်.ရတယ် ဆိုတာ အလွန်ကံကောင်းလို.ပါပယ်……………လူတိုင်းမှာ ကိုယ်တိုင်စုံဖြတ်ချတ်ဆိုတာရှိပါတယ်……..သူတပါးကိုဘဲ အားကိုးတာ မကောင်းပါဘူးခင်ဗျား………………ကျတော် ပြောချင်တာကတော. ကိယ်လူဖြင်.နေတုံးမှာ ဘာလုပ် ရင်ကောင်းမလဲ ဆိုတာ ကိုသေသေချာချာ ဆင်းစားရမှာ ဖြင်.ပါတယ်………….လူတိုင်းမှာ တန်းဖိုးထားတဲ. အကျင်.တခုရှိကြပါတယ်.။.. လူတယောက်နဲ.တယောက်ဆိုတာ မတူကျပါဘူး………..တယောက်က ကောင်းတာကို လုပ်တက်ပေမဲ. နောက်တယောက်က မကောင်းတာကိုလုပ်တယ်…………….လူတိုင်းမှာ မွေးတည်းက အကျင်းတခုဆီပါလာတက်ကျတာပါပယ်………….မကောင်းတာ လုပ်တဲ.လူတယောက်ကို ပြင်လို.မရဘူးဆိုတာ မဟုတ်ပါဘူး……………ကျတော် ပြောပြီးသွားပြီးဘယ် လူတိုင်းမှာ ကိုယ်ပိုင်းဆုံးဖြတ်တက်တဲ. ညဏ်ရှိပါတယ်။.
ပြင်လို.မရဘူးဆိုတဲ.လူက အဲဒီ.လူဆီးမှာ ကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်တဲ.ညဏ်မရှိလို.ပါဘဲ………..ဘ၀မှာ ကိုယ် လိုချင်တဲ.အရာကို ရအောင်ယူရပါမယ်………..ဒါပေမဲ. ကျတော် ပြောတာ အလုပ်နဲ.ပတ်သတ်တာကို ပြောတာပါ……………..တခြားအရာတွေကို မဆိုလိုပါဘူး……………ခင်ဗျားတို.တွေ ဒီးနေ. ခင်ဗျာတို.တွေ လုပ်နေကျတဲ. အလုပ်ပေါ……………..ကျတော် ပြောချင်းတာကတော. ကျတော် နိုင်ငံမှာ သူတောင်းစားတွေ
ဘာလို.များတာလဲ အားလုံးသိကြပါတယ်………..အလုပ်မှ မလုပ်ကြတာ………..ကျတော် နိုင်ငံမှာ အလုပ်မရှားပါဘူး……..ကြိုက်တဲ.နေရာဝင် လုပ်ရပါတယ်………….ဒါပေမဲ. အလုပ် လုပ်ချင် တဲ.စိတ်ရှိ မှ ဖြင်.မှာပါ..အလုပ် လုပ်ချင်စိတ်မရှိ တဲ.လူတွေကတော. ဘယ်တော.မှ ကြီးပွားမှာ မဟုတ်ပါဘူး……….နွားကိုပလာတာကျွေးနေသလို မဖြင်.နေဘူးလား………….သူကြိုက်လားမကြိုက်လား မသိဘူး အတင်းကျွေးနေတာဘဲ……..သူလဲ စားနေတာဘဲ…….ဘာမှန်းတော.မသိဘူး..၀ါးတော.၀ါးနေတာဘဲ..။။အဲလို မလုပ်ကျပါနဲ. အားလုံးမှာ ခြေတွေလက်တွေ အစုံပါကျပါတယ် ခြေတွေလက်တွေ မရှိလို.တောင်းစားတယ်ဆို တာက ကြားလို.ကောင်းပါတယ်…………လူဖြင်.ပြီးတော. လူရာမ၀င်းဘူးဆိုတော.မကောင်းပါဘူး………..နောက်တခုရှိသေးပါတယ်………အလုပ်ကြီးဘဲ လုပ်နေလို.မဖြင်.ပါဘူး………..ကောင်းမူ.ကုသိုလ်ဆိုတာရှိသေးပါတယ်……….ဘာသာတိုင်းမှာရှိ ပါတယ်….ကောင်းတာလုပ်ဖို.ဘဲ ပြထားတာပါ….မကောင်းတာလုပ်ရမယ်လို. ဘယ်ဘာသာကမှ မပြထားပါဘူး….
ကျတော် ပြောချင်းတာကတော. အလုပ်လဲ လုပ်ကျပါ……..အားရင်းအားသလို.ကောင်းမူ.ကုသိုလ်လဲ မမေ.ကျပါနဲ. ဘာလို.လဲ ဆိုတော………..အလုပ် လုပ်တယ်ဆိုတာကတော. လူဘ၀အတွက်လုပ်ကြတာပါ……
ကောင်းမူ။ကုသိုလ်လုပ်တယ်ဆိုတာ……..နောက်ဘ၀အတွက်လုပ်ကြရတာပါ………….အလုပ်ကြီးဘဲ လုပ်နေလို.မပြီးသေးပါဘူး………အလုပ် လုပ်ရတယ်ဆိုတာ ကိုယ်.မိသားစုအတွက်လုပ်ကျွေးကြတာပါ……….ဒီးတော.ကျတော် ပြောချင်းတာကတော.အလုပ်ဆိုတာ လူဘ၀မှာတင်ကျန်ခဲ.မှာ ပါ သံသယာကိုမပါ ပါဘူး…………သံသယာကိုပါဖို.အတွက်. ကောင်းမူ.ကုသိုလ် လုပ်ရမှာဘာ………..လူတိုင်းမှာ ကောင်းမူ.နဲ. မကောင်းမူ.လုပ်ဖို. ဘယ်ဟာကို အချိန်ပိုပေးကြသလဲ?
ဒါကျတော် မေးခွန်းထုတ်လိုက်တာ မဟုတ်ပါဘူး…….ဒါက အရမ်းကို ရိုးရှင်းလွန်းပါတယ်…လူတိုင်းလဲ သိပါတယ်ဗျာ…ကောင်းတာလုပ်ဖို.ဆို အချိန်မရှိကျပါဘူး…….မကောင်းလုပ်ရမယ်ဆို…ပိုက်ဆံပါ အကုန်ကျခံလိုက်ရသေးတယ်………လူတိုင်းက အမှားနဲ.မကင်းကြပါဘူး………..မကောင်းဒါကတော. နေ.နဲ.အမျှ လုပ်နေကျရတာဘာဘယ်…….မကောင်းမူ.ကို ရာခိုင်းနူန်းအပြည်.လုပ်ပြီး……ကောင်းမူ.ကုသိုလ်ကျတော. တခု တောင် မရှိ ဘူးဆိုတော. မကောင်းပါဘူး….
ကျတော် ပြောချင်တာကတော. တနေ.မှာ နဲနဲလောက်ဖြင်. တက်နိုင်သမျှကောင်းမူ.ကုသိုလ်လုပ်ကျပါ……ကောင်းမူကုသိုလ်ဆိုတာ အများကြီးရှိပါတယ်………….လူမြင်အောင် လုပ်တဲ. ကောင်းမူ.ကုသိုလ် ရှိသလို..လူမမြင်အောင်လုပ်တဲ. ကောင်းမူ.ကုသိုလ်လဲ ရှိပါတယ်………….အဲ.ဒီ.မှာ ဘယ်ကောင်းမူ.ကုသိုလ်က ကောင်းသလဲ ဆိုတော.
လူမမြင်အောင်လုပ်ကြပါ……….လူမြင်ပြီးတော.ဘာလုပ်မှာလဲ………ခင်ဗျာတို.ကို ကျောင်းတကာ။ဘုရားတကာကြီးလို. ခေါခံချင်းလို.လုပ်တာလား………
ဒါမှမဟုတ်ရင်း လူထင်ကြီးချင်လို. လုပ်တာလား……..အရင်းဆုံးအဲဒါကို ဆင်းစာြး့ပီးတော.မှ လုပ်ကျပါ။
ကိုယ်.ရဲ.နလုံးသားကနေ လိုလိုလားလား လုပ်တဲ.ကောင်းမူ.ကုသိုလ်ကပိုကောင်းပါတယ်……….ဘယ်သူမှ သိစရာမလိုပါဘူး………….မိမိနဲ. မိမိရဲ. ဘုရားသခင်သိဖို.ဘဲ လိုပါတယ်………
လူတိုင်းမှာ ရှိ ကျဘာတယ်……….မိမိ ကိုယ်တိုင်းကျုင်.တဲ.တရားကို ကိုယ်ကျင်.တရားလို.ခေါတာဘာ…ကိုယ်ကျင်.တရားကောင်းသလားမကောင်းဘူးလားဆိုတာ လူတယောက်ကို ကြည်.တာနဲ.သိရဘာသလား။။
မသိရပါဘူး……….သူ.ရဲ.လုပ်ရပ်ကိုကြည်.ပြီးမှ ဆုံးဖြတ်ပိုင်းခွင်.ရှိတာပါ………..ကောင်းတာ တခုလောက်လုပ်နေတာတွေ.ပြီး သူကို ကိုယ်ကျင်.တရားကောင်းတယ်လို. ပြောလို. မရပါဘူး………
ကျတော် တို.မှာ ဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင်.မရှိပါဘူး……………ဘယ်သူ မှန်တယ် မှားတယ်ဆိုတာလဲ ကျတော် တို.မှာ ပြောပိုင်းခွင်.မရှိပါဘုး……..လူသတော် များများမှာ အကျင်.တခုရှိပါတယ် အဲဒါက ဘာလဲ ဆိုတော. ကောင်းတဲ.လူ ကိုကောင်းတယ်လို.ပြောဖို.သတော် လေးဝန်လေးကျပါတယ်………..အကောင်းတခု ပြောဖို.၀န်းလေးကျပါတယ်..အဆိုး တရားပြောဖို.၀န်းမလေးပါဘုး…………….လူများကိုမကြည်.ကြပါနဲ.
ကို.ကိုယ်ကြည်.ပါ…….ကိုယ်ဘာလဲဆိုတာ …ကို.ကိုယ် ကိုယ် အရင်းမေးခွန်ထုတ်ပါ……..သူတပါးမကောင်းတာကိုမပြောပါနဲ. မိမိတွေလျှင်လဲ မပြောပါနဲ. စိတ်တဲ မှာ ဘဲ ထားပါ …………ကို.ယ်ပြောလိုက်မယ်ဆို ရင်း သူတပါးစိတ်မကောင်းဖြင်.ရပါလိမ်မယ်. အဲဒီ.အတွက်ကြောင်.မလို. ကျတေ်ာ တို.တတွေ တက်နိုင်သလောက် မိမိ ကိုယ်ကိုယ် ထိန်းကျပါ……..
သူတပါးကောင်းတာတွေ.ရင်းပြောကျပါ………ဒါပေမဲ.မပြောကျပါဘူး ဘာလို.လဲ ဆိုတော.သ၀န်တို.တက်တဲ.စိတ်ဆိုတာ လူတိုင်းမှာ ရှိကျပါတယ်……မိမိတက် သာသွားမှာကိုကြောက်ကြပါတယ်
လူတိုင်း အတွက် အောင် မြင် မူ.
(If you want to get ahead in life, go an extra mil...
Russia သို့ SMS ပို့လိုပါက
Singapore သို့ SMS ပို့လိုပါက
(မြန်မာ model girl) ၀က်ဆိုက်
ဖုန်းနံပါတ်မှတဆင့် အိမ်လိပ်စာနှင့် ပိုင်ရှင်ကို ဖေ...
၀င်နိုင်သည် Website လမ်းညွှန်(Direct)
AntiVirus Software လို သလို သုံး နိုင် ပါသည်။
DV ဖောင် ရှောက် သည်. လိပ်စာ
Eng; သီချင်း sites
လူစိတ် မရှိ ကြသူများနှင်. ပေါက်ကွဲ မူ. ပုံ ရိပ်
ပေါက်ကွဲ မူ. ဖြင်.ပွားပြီး အပြစ်မရှိတဲ. ပြည်သူတွေ...
( အင်္ဂလိပ်မှ မြန်မာသို ဘာသာပြန်ဆိုနိုင်သည့် ဆော့ဖ်ဝ...
(ကွန်ပျူတာပညာရပ်များ၊ စီးပွားရေးပညာရပ်များအပါအ၀င် ...
(အင်္ဂလိပ်စာလေ့လာလိုသူများအတွက် TOEFL အထောက်အကူပြုစာ...
ဗိုက်ရဒ် စကင်းများ free ဒေါင်းနိုင်သည်
ကမ္ဘာ. အဆိပ် အပြင်း ဆုံး သတ္တ၀ါ တစ်ကောင်
(မိမိချစ်သူ ဘာလုပ်နေလဲဆိုတာ satellite ကနေ တိုက်ရို...
ကိုသေမဲ. နေ.ကို အတိ အကျ တွက်တဲ. ဆိုက်
အသုံး ၀င်တဲ. links လေးတွေ ပါ
Down load flash song လုပ်နည်း
USB stick to window installation ပြု လုပ်နည်း
လူတိုင်း အတွက်လို အပ်သော အကြောင်းအရာများ
IP Broadband ရဲ. Proxy နံပါတ်လေးတွေ ပါ
ကွန်ပျူတာ မှာ Desktop plain screen ဖြင်.တဲ. ပြသနာ...
လူတိုင်း ကြုံတွေ.နေရသော ပြသနာ connection ကျရင်း ဘာ...
ဒါကတော. ကွန်ပျူတာ အကြောင်းလေးပါ Access Denied ဖြင...
အသုံးဝင် တဲ. ၀က်ဆိုက်လေးတွေ ပါ
၀က်ဆိုက် လေးများ ကြီုက်မယ်လို.ထင်ပါတယ်
welcome to ko htike